Namuhla, fashion yabesifazane isibe ezingabizi kakhulu. Kuyo kukhona usizo enkulu futhi lula, futhi le nhlanganisela njengoba ingubo yothando kanye nezicathulo, akekho shokiruesh.
Izimbadada Elegant noma stilettos musa emfashinini, kodwa ezimweni eziningi akhale Izicathulo ngaphandle isithende.
Labo ukulandela imfashini, uqagele ukuthi sizogxila sliponah. Ziyakwazi enemisebenzi ukuze enze kube nokwenzeka ukuba ukudala izithombe ezihlukile. Futhi uma sikhuluma inguqulo entsha ye zabo - slipony emsamo, kodwa kulo nyaka bayishaya wonke amarekhodi ukuthandwa.
Ngokokuqala ngqá lezi izicathulo wabonakala ngo-1977 yayihloselwe kuphela surfing. Umsunguli wawo Paul Van Doren necebo igama imodeli sokuqala - ukushelela-ons, okuyinto elihunyushwe English lisho "ngaphandle izintambo zezicathulo." Ngempela, slipony ibukeke amateki, ngubani esikhundleni lacing ezinhlangothini olimi, kukhona ifaka nokunwebeka.
Njengoba izicathulo ezemidlalo, abazange isikhathi eside, futhi ekupheleni abantu 80 abasha umxhwele lokhu izicathulo, waqala uzigqoka ku zonke izikhathi.
A ezihlukahlukene ukubukeka kanye yokuqedela
Namuhla, ikhabethe yilowo nalowo owesifazane osuke liqukethe slipony. usizo yabo futhi lula usephumile zonke izithiyo ubudala, futhi kuphela intokazi imfashini akuyona Kuhle kokusho. Slipony emsamo babe ngabo inketho kakhulu nge izicathulo stylish ukuthi ulingana noma izingubo.
Phezulu lenziwe ngezinto ezingokoqobo ezifana ukotini, jini, ngendwangu, Sweden noma isikhumba.
Ngenxa ezihlukahlukene okunjalo kuzo akuzona kuphela ehlobo kodwa futhi entwasahlobo and ekwindla. By endleleni, ukuthi izintokazi eziyihlazo uphathe ukugqoka isikhumba slipony emsamo kuze frost kuqala, skilfully hlanganisa them ababegqoke amajazi noma amajazi anezingane.
Esinye isizathu sokuba charm lokhu isihlangu - eziningi ezihlukahlukene imibala kanye imihlobiso ezahlukene.
Kalosha, ezinombala ofanayo nombala njengezindawo ezigqamile kanye iyashintsha iyaphupha ibe amathoni, iseli, umugqa, polka amachashazi - umbala cishe kungenakwenzeka kubala. Engeza ukuthi zonke izinhlobo imihlobiso - bezinto, sequins, rhinestones futhi mikhondo ezahlukene.
Yingakho abantu abaningi bakhetha abe ngazimbili ezimbalwa - nsuku zonke nenhle, futhi kuphela black slipony platform (ngenhla) kuthiwa uya eba esikhundleni izicathulo ahlukahlukene demi.
Njengoba imfashini yesimanje isidlulile zonke canons nemikhawulo, ukunika amandla abesifazane imfashini ukuqaphela indlela zabo kunoma isiphi fantasy ukuthi ungakwazi ukugqoka slipony lutho.
Jeans ibhulukwe. Naphezu kweqiniso lokuthi lokhu isihlangu esifanelana cishe zonke izitayela, stylish kunazo, kubukeka jeans ezimanikiniki Skinny, ibhulukwe noma Capri-amapayipi, kwakheka isithombe eyingqayizivele ngesitayela ezikhululekile.
Skirt anobude obungalingani kasilika satin, lace nezinye izicubu nge sliponami sihle. Lena ngubo okukhulu ngomsebenzi, ukuphola fashion izenzakalo.
Dress overlying noma ngalé khulula, kuhlangene lokhu isihlangu enze kube nokwenzeka ukuba ukudala ngendlela engokoqobo yemihlangano lolungakahleleki uhamba.
Izikhindi slipony kulekelelwa ihembe, topom noma plaid ihembe - isithombe zakudala amantombazane edolobheni, akusoze emfashinini.
Futhi uma uthenge imodeli ne ematheni mncane noma slipony emsamo, sizogqokani nabo - ngisho manqikanqika. Isilingo ukudala ngesibindi isithombe lelo kakhulu kuwe futhi ukugcizelela ubuntu bakho.
Njengoba lezi izicathulo bayindlala kakhulu, umbuto bese uyavuka - indlela ukumnakekela. Ukukwenza kube lula. Slipony on a yesikhulumi noma esisekelweni eliphansi lula ukuhlanza ngokubheja ku umshini wokuwasha bese ukhetha mode ezifanele. Basuke ibekezelelwe kahle kule nqubo, futhi emva ukuwasha bheka sengathi kusha.
Inyama nge amakhowe a sauce ukhilimu: iresiphi. Inyama nge amakhowe cream sauce kuhhavini, e multivarka ebhodweni
Izindlela zanamuhla inhlangano ukukhiqizwa